वातावरण संरक्षणका पक्षमा एकीकृत आवाज र अभियानको आवश्यकता छ – इन्सेक
आकाशमा तुवालोले ढाकेर वातावरण प्रदुषित भएको छ । धुलो र धुवाँ अनि ठाउँ–ठाउँमा लागेको डढेलो र निकटवर्ती भारतीय शहरहरुको वायु प्रदूषणको प्रभाव नेपालको आकाशमा परेको वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । पानी परेमा वा वायुको वेग चलेमात्र यो तुवाँलो हट्छ र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसै सन्दर्भमा वातावरणविद् भुषण तुलाधरसँग इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ तुलाधरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले हामी वातावरणीय दुष्चक्रमा परेका छौँ । यस्तो परिस्थिति यसअघि कहिले थियो वा यो खालको परिस्थितिभित्र हामी कहिलेबाट गाँजिदै गयौँ ?
अहिलेको वातावरणीय प्रदुषण जुन छ यो नयाँ होइन । नेपालमा प्रदुषण पहिला पनि थियो । अहिले छ । भोलि झन् बढ्दै जाने सम्भावना छ । प्रदुषणका विभिन्न रूपहरू हुन्छन् । एक हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै अगाडिदेखि नै नेपालका भान्छाहरूमा निस्कने धुवाँ प्रदुषणको मूल स्रोत हो । सायद अहिले पनि नेपालको वातावरण बिगार्ने यिनै भान्छाहरूले हो । भान्छाघरमा परम्परागत इन्धनहरूः दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्दा अत्यधिक मात्र प्रदुषण निस्कन्छ । त्यसबाट प्रभावित हुने महिला नै हो । जो भान्छामा अधिकांश समय बिताउँछन् । महिलासँग बस्ने काखे बालबालिका पनि निकै प्रभावित हुन्छन् । विद्यालय जाने बालबालिका पनि भान्छामा बसेर गृहकार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरू पनि प्रभावित हुने नै भए । अहिलेपनि नेपालको करिबकरिब दुई तिहाई घरमा यस्ता भान्छाहरू छन् भन्ने गरिन्छ । यो भनेको अहिले पनि करिबकरिब दुई तिहाई महिला यसबाट प्रभावित छन् ।
आधुनिकीकरण गर्ने नाममा हामीले अन्य इन्धन प्रयोगमा ल्याउन थालेका छौँ । चाहे मोटरसाइकलमा प्रयोग गर्ने पेट्रोल होस् चाहे उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कोइला नै किन नहोस् । जुनसुकै इन्धन बाल्दा पनि त्यसबाट प्रदुषण निस्कन्छ । र, यो बढ्दो क्रममा छ । यस्तो प्रदुषण धेरैजसो सहरी क्षेत्रमा भइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा प्रदुषण बढि हुन्छ र लिने मान्छे पनि बढि नै हुन्छन् । जनघनत्व बढि भएका सहरी क्षेत्रमा प्रदुषणको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यसको असर भयावह बन्छ । विगत केही दशक यता काठमाडौँजस्ता ठूला सहरमा प्रदुषणको मात्रा बढ्दो छ ।
अहिले लागेको तुवाँलो भनेको एउटा मौसमी प्रभाव हो भने अर्को देशभर लागेको डढेलोको कारण हो । डढेलोको कारण के होला त्यतातिर नजाउँ । अहिले यसको प्रभाव देशैभर फैलिएको छ । पानी नपर्ने र हावा नचल्ने कारण त्यो जहाँको तहिँ रहँदा उकुसमुकुसको वातावरण बनेको छ । प्रदुषणको स्रोत यथावत रहेकाले त्यसलाई हटाउनतिर हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । यो वर्ष डढेलो पनि अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । वैशाखको मध्यतिर सबैभन्दा बढि डढेलो हुने कुरा विगतहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ । डढेलोको मौसम खासै सुरू नै भएको छैन । गत वर्ष यो बेलामा ३ सय जति ठाउँमा भएको डढेलो अहिले २ हजार ७ सय जति ठाउँमा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पनि यस्तो भएको हो । जलवायु परिवर्तनले अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुने हुन्छ । यो वर्ष त्यस्तै भयो लामो समय सुख्खा हुन पुग्यो ।
संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । सरकारका कार्ययोजनाले यो हक सुनिश्चित हुने दिशामा छ ?
स्वच्छ मात्रै भएर भएन स्वस्थ वातावरणको आवश्यकता छ । वातावरणको अधिकार जनस्वास्थ्यसँग अन्तरसम्बन्धित छ । सरकारका योजनै छैन त म भन्न सक्दिनँ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो भने नागरिकको उक्त अधिकार प्रचलनमा ल्याउन पाउने अधिकार छ । सरकारको जिम्मेवारीलाई नागरिकले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको योजना हो । मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको कार्ययोजना लागु त गर्नु पर्‍यो नि ! यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वातावरण नीति, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति छन् । त्यसैगरी यातायात नीति, स्वच्छ उर्जा प्रवर्धन नीति छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हामीले जाहेर गरेका छौँ । हामीसँग नीति छन् । तर, नीति कार्यान्वयन गर्ने नियतमा भने समस्या छ । वातावरणलाई प्राथमितामा राखेर लगानी गर्ने र काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । वातावरणको विषय सबैको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय सबैको हो । समग्रमा भन्नु पर्दा यो विषय सबै मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित छ । वातावरणको हकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जुन काम अहिले हुन सकिरहेको छैन ।
वातावरणको अधिकार उपभोगका लागि सरकारले र नागरिकले गर्नुपर्ने मुलभूत काम के के हुन् ?
सरकार आफैँले बनाएका नीति नियमहरू अलि राम्रोसँग हेर्नुपर्‍यो । नीति बनाउँदै बिर्सँदै जाने वातावरणको अन्त्य हुनु पर्‍यो । २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई मात्रै शसक्तिकरण गर्न सके पनि डढेलो नियन्त्रणमा केही हदसम्म सफलता हात पार्न सकिन्छ । सरकारले नेतृत्व लिनु पर्‍यो र यो विषयलाई प्राथमिकतामा पारेर लगानी गर्नुपर्‍यो । नागरिकले गर्ने काममा पहिला त बुझ्नुपर्‍यो । यो विषयमा चासो दिनु पर्‍यो । वातावरणको विषय भनेको मेरो, बालबालबालिकाको र मेरो परिवारको विषय हो भनेर अपनत्व लिनु पर्‍यो । वातावरण प्रदुषण सामान्यतया मानवीय क्रियाकलापबाट नै हुने भएकाले आफूले गर्ने क्रियाकलापबाट सकेसम्म कम प्रदुषण गरौँ भनेर काम गर्नु पर्‍यो । वातावरण प्रदुषित छ भने कसरी बच्ने भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले जान्नु पर्‍यो । विषय विज्ञले भनेका कुरा मान्नु पर्‍यो । र, नागरिकले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको आवाज उठाउने हो । आफूले जहाँ सकिन्छ त्यो ठाउँमा आवाज उठाउनु असल नागरिकको कर्तव्य हो । वातावरण संरक्षणका पक्षमा एकीकृत आवाज र अभियानले वातावरणमा देखिएको प्रदुषण स्वतः कम भएर जान्छ ।
हिमालमा हिउँ नै छैन भनिन्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म ?
तापक्रम वृद्धिका कारणले हिमालमा हिउँ पग्लिएको हो । यो हामी मानव जातिको क्रियाकलापबाट नै भएको हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ रोक्न नै त सकिन्न । हाम्रो दैनिकीमा ल्याउने परिवर्तनले यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नै पर्छ ।
के हामीले दैनिकीमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले न्यूनीकरण सम्भव छ ?
सकिन्छ । हामीले नै न्यूनीकरण गर्ने हो । आजैबाट सुरूवात गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको अवस्था त्यति सारै निराशजनक पनि छैन । अहिले नै नगर्ने हो भने हामी पछि अप्ठेरोमा पर्छौँ । हामी अहिले विकास निर्माणको चरणमा छौँ । यहिबेला नै हामीले दुरदर्शी योजना ल्याउनु पर्छ जसले गर्दा वातावरणीय दुस्प्रभाव रोकियोस् । न्यूनीकरण होस् । यो काममा आजैबाट हामी सबैले एकैपटक थालनी गर्नु पर्छ । अब ढिला नगरौँ । वातावरण जोगाऔँ । हामी पनि जोगिऔँ ।